SomaliaReport: Madaxweynaha Somaliland Xilkii kaqaaday
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo oo isku shaandheeyey saraakiishiisa nabadsugida isagoo xilkii kaqaaday hoggamiayah ciidamda militariga, Maxamed Cabdullaahi Xasan Jidhif kuna bedelay Ismaaciil Maxamed xasan Shaqalle, sida qoraal dawlada lagu cadeeyey.
Ilo kudhow Madaxweyne Siilaanyo ayaa Somalia Report in isku shaandheynta ay keentay markii Jidhif iyo Madaxweyne Siilaanyo isku khilaafeen shirkii arrimaha nabadsugida ee habeenkii Arbacada ee Hargeysa.
Sarkaal ku sugan Hargeysa oo codsaday inaan la magacaabin ayaa Somalia Report sheegay in khilaafku yimi markaa ciidamada Soomaaliland ku qabsanwaayeen Buuhoodle oo ku sugan gacanta malayshiyada Dawlad Goboleedka cusub ee Khaatumo.
Dad degaanka ayaa Somalia Report u xaqiijiyey go’aanka.
“Waxaan maqalay go’aanka caawa dadkaana isla dhaafaya. Dadka qaarkood weysoo dhaweeyeen isbedel iyadoo qaarkoodna ka horyimaadeen, laakiinse qofkasta waa ogyahay inay dagaalka Buuhoodle la xiriirto,” Cabdirisaak Maxamed oo degan Hargeysa ayaa yiri.
Ciidamada Soomaalilaand ayaa weerarey dagaalyahanada malayshiyada Khaatumo dabayaashadii Janaayo kadibna shalay ayey malayshiyadu soo weerartay ciidamada Soomaalilaand shalayto.